Vangani vanopemberera Isita
1. Maererano nemitemo yeChechi yeOrthodox, Rumuko Rwakajeka rwaKristu rwakanyorwa sechiitiko chikuru chechechi chegore uye chinopembererwa kwemazuva manomwe akazara.
Kwakatangira zororo reIsita
2. Kwakatangira zita rezororo rine mireniyamu midzi. "Passah", iro kubva muchiHebheru - "shanduko", raifananidzira kusunungurwa kweIsraeri kubva muhutapwa hweEjipitori. Zvakare kubva muchiGiriki "pascha" - zvinoreva kununurwa, ndima.
VaIsraeri muuranda kuvaIjipita
3. Zvinofadza kuti kusvika gore ra1582 mazuva ekupemberera Isita aive akajairika pasi rese uye akabatana. Uye mushure meizvozvo, mukuru weVictoria, Pope Gregory XIII, akagadza karenda yaGregory pakati pevaKaturike, mwaka wezhizha wekuverenga uye nemazuva acho akazove akasiyana. Mune denderedzwa reOrthodox, ivo vanotungamirwa nekarenda yaJulian.
Nei mazai anopiwa Pasika
4. Tsika ipa Easter mazai uye dhayi anotambanudza kubva kunguva dzenguva yekare yeRoma (kutonga kwamambo Tibheriyo). Pane ngano. Apo mudzidzi waKristu, Mary Magadharini, akapa mutongi chipo chakadai uye akataura nezve kudzoka kwemashiripiti kuhupenyu hwaJesu, mutongi, aine kusahadzika, akataura: . " Asi mushure memashoko aya, maererano nengano, zai rakachinja ruvara munguva pfupi. Mazuva ano, mazai akapendwa mumhando dzakasiyana dzemumvuri, asi zvakatsvuka izvo zvinoonekwa sezvinoyera uye zvakanyatsogadzwa - iro ruvara rwehutano, kuzvarwa patsva uye kupemberera.
Chii chinonzi Pysanka
5. Dzimwe nguva Mazai eIsita anoshongedza nemhando dzose dzezvishongo. Mushure meizvozvo, anonzi mazai eIsita. Zvinotendwa kuti uku kwave kuri kuita kubva panguva dzechikristu chisati chavapo. Izvi zvinokonzeresa kune zvekare tsika dzevanhu nezvezai semucherechedzo weusingadzivisike uye unoramba uchiitika wekumutsiridza zvakasikwa. Nenzira, iyo yega uye yakasarudzika "Easter Egg Museum" iri pasirese iri muIvano-Frankivsk dunhu (Kolomyia). Mukuunganidza kwake kune zvinopfuura zviuru gumi nezviviri zvekuratidzira kubva kumatunhu akasiyana eUkraine.
Ndiani Easter Bunny
6. Munyika zhinji dzekuEurope, chiratidzo chakakurumbira uye tsuro yakava gamba rezororokubereka mazai eIsita. Pamakero aya, pane ngano pamusoro pemwarikadzi wechihedheni Estra, uyo akashandura mashiripiti kuita shiri, iyo inertia yakaramba ichi ... kuisa mazai.
7. Izai-re-mhando zai reIsita, 8 mita kureba uye 5 metres yakafara, iri mutaundi reCanada re Vegreville. Uye yakasarudzika nekuti ine zvidimbu zvekupwanya ndege.
Vegreville Isita Zai
Evha inodhura kwazvo yeIsita zai kubva kuLa Maison du Chocolat
Kune edu materu, echinyakare Isita inofungidzirwa: kubika madhayi, makeke eIsita, kuvhenekera ivo muchechi uye kusangana nevadikanwi. Ngatirambei tichikudza tsika dzedu!
Zvichava zvinonakidza kuverenga
Tinopira mazai eIsita: top-12 zvakanakisisa mazano ekugadzira
Curd Isita nezvinonhuwira, mazambiringa akaomeswa uye mandimu zest - dhiri
Easter zai mu "quilling" maitiro. DIY Pasita zai
Mibvunzo ye67 mu database yakagadzirwa mu 0,464 masekondi.